Nezvedu - Qingdao Gladline Maindasitiri Uye Trade Co., Ltd.
Tsigiro yeemail info@gldlit.com
Fonera Tsigiro +86 13969740790
Edge banding muchina
Otomatiki Edge bhendi Machine
Manual Edge Bhendi Machine
Nomazvo Panel Akaona
CNC Panel Vakaona
Cold Press Muchina
Muchina weDhinda Wekupisa
Brush Sanding Muchina
Yakakura Bhandi Sanding Machine
Mamwe Machira Ekuveza
Qingdao Gladline Indasitiri uye Trade Co., Ltd. iri chena bvudzi kuveza michini inogadzira michina, iri muQingdao China, ine zita rekuti "China's Woodworking Machinery Guta". Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisira CNC Router, Panel Yakaona, Edge Banding Machine, Muchina wekutema, Muchina wekuchera uye mamwe mapaneru fenicha yekugadzirisa michina. Nhasi michina yedu iri kuita munyika dzinopfuura makumi masere nematunhu epasirese senge United States, Mexico, France, Spanish, Australia, Russia, Middle East, Southeast Asia uye yatanga kubatana nevashambadzi munyika zhinji.
Gladline Machinery inongori maminetsi makumi matatu 'kutyaira kubva kuQingdao Port, iyo inoderedza zvigadzirwa zvemitengo uye nguva yenguva yevatengi.
Makore makumi maviri ekugadzira ruzivo
Gadzirisa services kugona
Maminitsi makumi matatu uchityaira kuenda kuQingdao Port
Nguva ndarama kune wese munhu. Chinhambwe chekufambisa chinhambwe chinogona kudzikisira logistics mutengo uye nenguva mutengo wevatengi. Gladline Machinery inongori maminetsi makumi matatu kubva kuQingdao Port. Ndiwo mukana wakakura kwazvo mukugadzirisa zvinhu
Gladline Machinery inozvipira kuendesa kugona pane bhizinesi rayo. Kuti ienderere mberi nekukura kwakasimba, yakawana mumakore achangopfuura, kambani inoita mari inoramba ichienderera mukuvandudza vashandi vedu uye matekinoroji edu. Izvo zvinounza Gladline Machinery yakasimba tekinoroji simba, yekugadzira kugona, yakasimba yemhando yekuongorora sisitimu uye yepamusoro-mu-kirasi mushure-yekutengesa sevhisi, saka Gladline Machinery isarudzo yakavimbika yevatengi.
Kupa zvakanakisa-mukirasi mhinduro kune vatengi vedu vatinoshandira.
- Isu tinoshumira vatengi vedu nekuvimbika seyakajairwa. Kiredhiti chinhu chisingabatike icho chakakosha munharaunda yanhasi. Zvipingamupinyi zvekutendeseka zvinouya kwete chete kubva kune vekunze nyika, asiwo nekuzvidzora kwedu uye nesimba redu retsika.
- Isu tinoteedzera kugona, takamira kumberi kwehunyanzvi uye kukura, kudzidza kwehupenyu hwese, kuteedzera kuenderera kunatsiridza, uye kupa kutamba kuzere kune kwedu kugona.
- Isu tinopa mamiriro ekuenderera mberi kwevashandi, simbisa kuti mushandi wese anogona kufambira mberi mukambani, kudzikisa huwandu hwevashandi, uye kuona mhando yechigadzirwa.
- Tinodzivirira kuchengetedzeka kweshamwari dzedu. Kuchengetedza ibasa rakagovaniswa uye risingapindirani.
Isu tinoshumira vatengi vedu nekuvimbika seyakajairwa. Zvipingamupinyi zvekutendeseka zvinouya kwete chete kubva kune vekunze nyika, asiwo nekuzvidzora kwedu uye nesimba redu retsika.
Cnc Router Kubatsira
China kuti kuveza michini Trans ...
Mutengi Akagamuchira Machina Ake